အငျဂငျြအသဈ နဲ့ ပှဲထုတျလိုကျတဲ့ အကွမျးခံToyota Hilux အသဈ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Toyota က ပှဲထုတျလိုကျတယျ။
suspension ကိုလညျး ပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးထားတယျ။
အငျဂငျြကိုလညျး ပါဝါပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးထားတယျ။
ရှေးယခငျ ဟိုငျးလပျဈကို ခတျေမီအောငျ လုပျပေးထားတာဖွဈပွီး မာတယျ၊ အကွမျးခံတယျ ဆိုတာကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားတယျ။
grille (ရှဲလျ) နဲ့ ဘနျပါ တို့ကို ဒီဇိုငျးအသဈ လုပျပေးထားတယျ။ မီးမှာ LED ကို ရှရေ့ော နောကျရော သုံးထားတယျ။ ဘီးတှကေ ၁၈ လကျမ ဘီးတှေ။ ကိုယျထညျ အရောငျမှာလညျး အသဈတဈရောငျ စီစဉျထားပွီး Titan Bronze လို့ အမညျပေးထားတယျ။
ကားထဲမှာ ၈ လကျမ multimedia screen ကို အလယျနရောမှာ ထိုငျပေးထားတယျ။
သုံးထားတဲ့ ဆော့ဖျဝဲလျကိုလညျး ပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးထားတယျ။
စကျနှိုးစကျသတျအတှကျ နှိပျစရာ ခလုတျတဈခု ပါတယျ။
အသံပိုငျးအတှကျလညျး အကောငျးစား အသံစနဈကို သုံးပေးထားတယျ။
လမျးပွမွပေုံအတှကျလညျး ဂွိုဟျတုလမျးပွစနဈ ပါတယျ။
ကားကို အမွငျမှာ လှတပတ မရှိဘူး။ အကွမျးပတမျးရုပျ ပေါကျနတေယျ။ တကယျလညျး အကွမျးခံတယျ။ အခုအခါမှာ ကားအမြားစုမှာ ဖရိနျ မထညျ့ကွတော့ဘူး။ ပဈကပျတှမှောလညျး အလားတူပဲ ဖရိနျ မထညျ့ပေးတော့ဘူး။ ဟိုငျးလပျဈကတော့ အခုအထိ ကိုယျထညျကို ဖရိနျပျေါမှာ ထိုငျပေးထားတယျ။
အငျဂငျြက မွငျးကောငျရေ ၂၀၁ bhp ရှိတဲ့ ၂ . ၈ လီတာ ဒီဇယျတာဘို တပျပေးထားတယျ။
သုညမိုငျကနေ တဈနာရီ ၆၂ မိုငျကို ၁၀ စက်ကနျ့ဖွငျ့ ရောကျအောငျ အရှိနျတငျလို့ ရတယျ။
ကားအောကျပိုငျး suspension မှာလညျး ရှော့ဘားတှေ၊ ဘှတျရျှတှေ၊ လေးထုပျတှကေို ဒီဇိုငျး အသဈလုပျပေးထားတယျ။ လမျးကောငျးမှာ မောငျးရငျ ကား ငွိမျနစေဖေို့နဲ့ လမျးကွမျးမှာ မောငျးရငျ ဒဏျခံနိုငျဖို့ လုပျပေးထားတဲ့ ဒီဇိုငျးသဈတှေ ဖွဈပါတယျ။
မွို့တှငျး မောငျးရငျ ကားကို စကျမသတျဘဲ ရပျစောငျ့နရေတဲ့ အခြိနျတှေ မြားတယျ။ အဲဒီ အတှကျ အငျဂငျြကို အအားထားခြိနျမှာ ငွိမျစဖေို့ လညျနှုနျး rpm ကို လြှော့ပေးထားတယျ။
တိုယိုတာက Hilux ကို ၁၉၆၈ ခုနှဈမှာ စတငျထုတျလုပျခဲ့တယျ။ အခုဆိုရငျ နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျောခဲ့ပွီ။ အခုအထိ Hilux ဆိုရငျ မာတယျ။ လီဗာနငျးရငျ နငျးသလို ဆှဲတယျ။ ဘရိတျကလညျး တိကနဲ ရပျပေးနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှကေို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။
အင်ဂျင်အသစ် နဲ့ ပွဲထုတ်လိုက်တဲ့ အကြမ်းခံToyota Hilux အသစ်
မာတယ်၊ အကြမ်းခံတယ် ဆိုပြီး သိထားကြတဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အကြမ်းခံ Hilux အသစ်ကို Toyota က ပွဲထုတ်လိုက်တယ်။
suspension ကိုလည်း ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ အင်ဂျင်ကိုလည်း ပါဝါပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ ရှေးယခင် ဟိုင်းလပ်စ်ကို ခေတ်မီအောင် လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး မာတယ်၊ အကြမ်းခံတယ် ဆိုတာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်။
grille (ရှဲလ်) နဲ့ ဘန်ပါ တို့ကို ဒီဇိုင်းအသစ် လုပ်ပေးထားတယ်။ မီးမှာ LED ကို ရှေ့ရော နောက်ရော သုံးထားတယ်။ ဘီးတွေက ၁၈ လက်မ ဘီးတွေ။ ကိုယ်ထည် အရောင်မှာလည်း အသစ်တစ်ရောင် စီစဉ်ထားပြီး Titan Bronze လို့ အမည်ပေးထားတယ်။
ကားထဲမှာ ၈ လက်မ multimedia screen ကို အလယ်နေရာမှာ ထိုင်ပေးထားတယ်။
သုံးထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုလည်း ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးထားတယ်။
စက်နှိုးစက်သတ်အတွက် နှိပ်စရာ ခလုတ်တစ်ခု ပါတယ်။
အသံပိုင်းအတွက်လည်း အကောင်းစား အသံစနစ်ကို သုံးပေးထားတယ်။ လမ်းပြမြေပုံအတွက်လည်း ဂြိုဟ်တုလမ်းပြစနစ် ပါတယ်။
ကားကို အမြင်မှာ လှတပတ မရှိဘူး။ အကြမ်းပတမ်းရုပ် ပေါက်နေတယ်။ တကယ်လည်း အကြမ်းခံတယ်။ အခုအခါမှာ ကားအများစုမှာ ဖရိန် မထည့်ကြတော့ဘူး။ ပစ်ကပ်တွေမှာလည်း အလားတူပဲ ဖရိန် မထည့်ပေးတော့ဘူး။ ဟိုင်းလပ်စ်ကတော့ အခုအထိ ကိုယ်ထည်ကို ဖရိန်ပေါ်မှာ ထိုင်ပေးထားတယ်။
အင်ဂျင်က မြင်းကောင်ရေ ၂၀၁ bhp ရှိတဲ့ ၂ . ၈ လီတာ ဒီဇယ်တာဘို တပ်ပေးထားတယ်။
သုညမိုင်ကနေ တစ်နာရီ ၆၂ မိုင်ကို ၁၀ စက္ကန့်ဖြင့် ရောက်အောင် အရှိန်တင်လို့ ရတယ်။
ကားအောက်ပိုင်း suspension မှာလည်း ရှော့ဘားတွေ၊ ဘွတ်ရ်ှတွေ၊ လေးထုပ်တွေကို ဒီဇိုင်း အသစ်လုပ်ပေးထားတယ်။ လမ်းကောင်းမှာ မောင်းရင် ကား ငြိမ်နေစေဖို့နဲ့ လမ်းကြမ်းမှာ မောင်းရင် ဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းသစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တွင်း မောင်းရင် ကားကို စက်မသတ်ဘဲ ရပ်စောင့်နေရတဲ့ အချိန်တွေ များတယ်။ အဲဒီ အတွက် အင်ဂျင်ကို အအားထားချိန်မှာ ငြိမ်စေဖို့ လည်နှုန်း rpm ကို လျှော့ပေးထားတယ်။
တိုယိုတာက Hilux ကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ခဲ့ပြီ။ အခုအထိ Hilux ဆိုရင် မာတယ်။ လီဗာနင်းရင် နင်းသလို ဆွဲတယ်။ ဘရိတ်ကလည်း တိကနဲ ရပ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။